I-Barnegat Inlet Exinzekile Manje Ehlanganisiwe Ejulile - I-Ellicott Dredges Blog
Source: ISandPaper, eNew Jersey
Ngenkathi i-hopper dredge "Currituck" igadla kulokho imvelo eqhubeka nokufaka eBarnegat Inlet, eNew Jersey, e-USA, ulwandle lwaseLoveladies eLong Beach Township luphinde lube ngumnikeli kulo nyaka.
I-US Army Corps of Engineers 'dredge iqede usuku lwayo lwasehlobo lwezinsuku ezingama-65. Ikhethe ama-cubic yards angama-100,000 20,000 esihlabathi ukuvulela indlela amabutho ezentengiselwano nezokungcebeleka, umsebenzi ewenza kabili ngonyaka. Amayadi angama-cubic angama-XNUMX XNUMX aleyosihlabathi aphonswa ngasogwini lolwandle eLoveladies Beach.
Ngenxa yalokho, kusho uKhomishani waselokishini uFrank T. Pescatore, amabhishi lapho “angcono kakhulu kunawo wonke engake ngawabona eminyakeni edlule.”
ISiphepho uFelix sashiya iziqu ezinkulu zesihlabathi eduze nolwandle kangangokuba “abanye abantu bashaya ucingo babuza ukuthi ngabe sasakha izindunduma zesihlabathi ngasizathu simbe.” Futhi ukudonsa kabusha kusizile, kusho uPascatore.
“Kusizile impela ngoba kunomgodi omkhulu ovela ePyramid House. Lokho kubukeka kimi sengathi kugcwala kahle, ”kusho uPescatore. "Akunangqondo ukuyilahla kwenye indawo, ngoba lapho uyidinga khona lapho kukhona khona izimbobo." UPescatore uqhubeke waphawula ukuthi abanye abadobi kungenzeka bangajabuli njengabanikazi bezindawo. “Lowo mgodi wawuyindawo enhle yokudoba.”
Abanikazi bezikebhe ezinkulu zokuhweba, nokho, abanazikhalazo. UJohn Larson, ongomunye wabanikazi bamachweba eViking Village ophethe isikebhe sephathi uMiss Barnegat Light nezikebhe zokudoba ezentengiselwano uKathy Ann, Karen L, Lori L, F. Nelson Blount, Grand Larson, noLindsey L, babhale isimo se itheku “likhulu.” Iscalloper esingamamitha angu-90 uKathy Ann sidonsa amamitha ayi-12 wamanzi futhi sidinga ukujula okuphakathi kwamamitha ayi-16 i- "Currituck" egcina ngokungena.
"Ngalolo dredi nalelo qwaba ledwala nangendlela uhulumeni asiphathe ngayo, kuhle," esho. "Kuhle ukungena, ngakho-ke ukuhweba okungena nokuphuma lapha kukhulu." “Inqwaba yamatshe” igama lesidlaliso likaLarson leSouth Jetty entsha engamaRandi ayizigidi ezingama-41, eyaqedwa ngo-1991.
Abanye bangabaza ukuthi kungani $ 800,000 ngonyaka dredging iyadingeka ngokuphelele, ine-jetty entsha endaweni. Kepha ukuvama ukulungiswa njalo kwakuyiplani ngaso sonke isikhathi, ngokusho kokhulumela i-US Army Corps of Engineers uRich Chlan.
"Ingqikithi yama-cubic yards angu-150,000 asuswe ngonyaka icishe ifane neyangaphambi kokuba kwakhiwe i-jetty, kodwa umehluko ukuthi baya ngokuya betholana phezulu manje," esho.
Isakhiwo sisenkontileka yokugcina ubuncane okungenani bezinyawo ze-12, kanti ngaphambi kokuthi kwakhiwe i-jetty entsha, okufakwayo kwakudonswa kuze kufinyelele kumamitha ayi-10, ngokusho kukaChlan.
Ukwehliswa kabusha, okuphelele komsebenzi wezinyanga ezine, kuhlelelwe ukuthi kuqhubeke minyaka yonke. I- “Currituck” eyi-150 ft. (45.7m) ende yaklanywa futhi yakhiwa yi-Ellicott® International yaseBaltimore, MD emuva ngonyaka we-1974. Eminyakeni engamashumi amabili nantathu kamuva, i-dredge isasebenza ngokuthembekile.
"Ukwehliswa kuzodingeka njalo," kusho uChlan, "ngoba uma ungaqhubeki nokudonsa, ekugcineni konke kuzogcwalisa, bese ubuyela kuleso simo esifanayo sezimo ezingaphephile."
Okufakwayo Okuvela Embonweni KaDredger
Ngaso sonke isikhathi uma uCaptain "Currituck" u-Ed Evans eza edolobheni, uthola ukuqongelelwa ukuze aqokelele amandla akhe okuhlukanisa phakathi. Kodwa isiteshi "sibonakala sibambe kangcono kulo nyaka," esho.
“Iyaphinda igcwalise ngokushesha okukhulu. Kodwa kimina, kubonakala kungasalungile njengakuqala. ”
Kepha okungenani kulo nyaka, isicathulo esiphikelelayo ekugcineni kweNorth Jetty kubonakala ngathi asakheki. U-Evans wakhomba eshadini lokuzwakala. “Kusukela bafaka iSouth Jetty, izikebhe ezinkulu zikwazile ukuhamba zize khona lapho ekupheleni kweNorth Jetty. Kuleli shadi elidala elibonisa isicathulo esasikhona, asisekho lapho; ukuphela kweNorth Jetty kuhlala kuvulekile. Futhi isiteshi esisidalile sihlala sivulekile kangcono. ”
Izinto ezingahanjiswa eLoveladies Beach zifakwa eningizimu yeSouth Jetty entsha, lapho, ngokusho konjiniyela beCorps, ikhuphukela ngaseningizimu ngaseBarnegat Light futhi, ekugcineni, iLoveladies Beach. "Uma ukhuluma nabantu okumele bazi, isihlabathi ngokuvamile sihamba ngale ndlela ... futhi uma ufaka (isihlabathi esimanzi) emanzini angaphansi kwamamitha ayi-15, uzoqala ukumasha ugu," kusho u-Evans .
ISouth Jetty yakudala, manje engxenyeni ethile, igcwaliswa kancane kancane ngesihlabathi esiphakathi kwayo neSouth Jetty entsha.
"Abebefuna ukuthi sikwenze ngempela ukuzama ukusondela lapha eduze nale jetty endala futhi sikugcwalise ngesihlabathi," kusho u-Evans. “Abantu ababenezikebhe ezincane zejet babengena lapha futhi bangawaboni lawo matshe. Lokhu ekwenzayo kusebenza phansi olwandle. ”
Ishicilelwe kabusha kusuka eSandPaper, eNew Jersey